कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् ! « Online Tv Nepal
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् !
Published :6March, 2020 12:59 pm
यदि तपाईंमा कोरोनाको संक्रमित कुनै लक्षण मिल्दो छ भने यसलाई अनदेखा नगर्नुहोला । अर्थात ज्वरो, खोकी, हाच्छ्यु वा श्वास फेर्न समस्या भइरहेको छ भने तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ । साथै संभावित लक्षण मिल्दो भएमा यसलाई पाल्नुको सट्टा तत्काल निको पार्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ । तर आफै औषधि किनेर खानु चाहि मुर्खता हुनेछ । यसका लागी सकेसम्म अस्पताल गई चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्दछ ।